Ku saabsan BiasLighting.com iyo MediaLight - MediaLight Nalalka Nalalka
Ku saabsan BiasLighting.com iyo MediaLight
BiasLighting.com waa qayb ka mid ah Shaybaarada muuqaalka, LLC, daabacaha qaar ka mid ah wax soo saarka ugu fiican adduunka ee fiidiyoowga - oo ay ku jiraan Spears & Munsil Benchmark, LED-yada loo yaqaan 'Colorgrade LEDs' iyo MediaLight Bias Lighting.
Hay'ad kasta oo heerar ah waxay kugula talineysaa nalka toosan ee sawirka saxda ah waxaanan ogaanay inay jirto fursad lagu baabi'inayo jahwareerka suuqa iyadoo la abuurayo xalka saxda ah ee saxda ah ee 6500K.
In kasta oo diiraddeenna asalka ahayd ay ahayd xiiseyaasha masraxa guriga, Nidaamka Nalalka ee loo yaqaan 'MediaLight Beas Lighting Lighting' ayaa caddeeyay xitaa ka sii caan badan midableyda xirfadleyda ah iyo tifaftirayaasha. Iyo inta ay arkayaan rumeynayaan, iyaguna waxay leeyihiin aaladda lagu xaqiijiyo sheegashooyinkayaga.
BiasLighting.com waxaa lagu gaari karaa siyaabaha soo socda:
Boqortooyada Midowday: + 44 20 7193 7351
Si kastaba ha noqotee, fadlan nagala soo xiriir emayl ama la hadal su'aalaha wax soo saarka. Waxaan haynaa macluumaad badan oo aan jeclaan lahayn inaan ku wadaagno barta, mana aha wax aad u fudud in lala wadaago macluumaadkan taleefanka. Haddii aanan ka jawaabi karin su'aashaada wadahadal ama emayl, waan ku faraxsanahay inaan u leexanno taleefanka, laakiin ma qaadanno amarrada taleefanka. Haddii tani aysan ahayn baaritaan wax soo saar, waan ku faraxsanahay inaan kuhadalno taleefanka, laakiin aan jadwal u sameysano wicitaanka emaylka. Sababtoo ah tirada badan ee wicitaannada spam ee aan helno, wiciyeyaashayagu badiyaa lama daarin, gaar ahaan 9-5 saacadaha shaqada ka dib.
Cinwaankayaga boosta snail ee soo celinta iyo sheegashada dammaanadda: